How I Kurasika Inenge 200 Bitcoin kutengesa mwedzi uyu wapfuura - Blockchain News
How I Kurasika Inenge 200 Bitcoin kutengesa mwedzi uyu wapfuura
An anorayiridza nyaya ne Reddit, uyo aida kuramba kusazivikanwa.
saka, refu nyaya pfupi, Ndakatanga vanotengesa gore rakapera, anga mumucheto madanha yose run kubva 1LDK kusvika 19k ( dzimwe nguva nokuvhara pamusoro, dzimwe nguva dzokugumisa zvakare mangwanani kana kunonoka, asi nguva dzose kuwana)
ndakatendeuka 3 anozvininipisa btc kwandaiva kubva kutamba Poker (panguva 3k) munenge 200 BTC yaiva anenge 4 miriyoni pamusoro uye yaizova 2 miriyoni pa ano mitengo.
Ndakafunga yaiva wokutengesera shasha, mwari, chero. zvakadaro hazvo, ichi ndipo kusuruvara rinotanga.
Mushure kunorasirwa marara kubva 19k kusvika 11k Ndakaenda refu nechepasi, uye akaramba achiwedzera pabasa rangu pamusoro dauka kusvika 12k 13k, 14K. ndokubva, panguva 16k katsi akafa, nzvimbo yangu yaiva mberi 100 BTC mu mubereko. Panzvimbo kuvhara zvino uye kuva vanosvika 300 BTC, Ndakawedzera zvireruke uye zvakawedzera nzvimbo yangu saizi. Izvi chinzvimbo yose yakanga liquadated pamusoro donhwe shure 12k, nekuti kupinda yangu vakanga vatamira kumusoro zvikuru. ndakarasikirwa 100 btc bepa purofiti uye zvinenge 50 BTC kumahombekombe. Ndakanga devasted, uye pasi 150 BTC muunganidzwa.
Mushure vanoongorora zvinhu, Ini vakasvika pakugumisa kuti pombi kusvika 16k aiva akafa katsi uye kuti tiri kuenda dzikisa. Saka I shorted. At 12k. Added pa 13k. Added pa 14 uye 15k. Vakapindira liquidated kumusoro pa 17k. Another 50 BTC kurasikirwa. kusvikira 100.
funga, OK takaita yepamusoro soro pa 17k, uptrend shure pamusoro. akaenda refu. Vakapindira liquidated pa 13k.
50 BTC akasiya. kunorira, sava nechokwadi, hapana chinobatsira whats kuchipfuurira. Akagara kubudikidza donhwe kuti 9k, kana isu bounced ndakafunga kungava pasi. uchishuva pa 11500, vhunduka kuvharwa 10500. Patakaenda 13k ndakanga uchikava pachangu chokuvhunduka mukuvhara, vakaenda refu pa 12800.
Liquidated ichi mangwanani yokupedzisira bitcoin yangu.
Panguva ino ndiri achiri nehana, yokupedzisira mishoma Ive vakaregeredza ukama uye chikoro, uye Ive vanga achiyeverwa pamusoro kurarama yakakwirira upenyu vapfumi sezvo fuck nemamiriyoni dzangu.
ikozvino, Ndiri asiko.
Kuisa izvi saka vamwe dont wokubheja kure upenyu kuchinja mari. Dont kuda Mipiro kana mazano kwete varindi kero dont PM ini. Handina kuda kunzwa btc zvakare nokuti ndinoda kukanganwa shoko
gypsytoy Handina sokuti varege kudzoka. Ini kumboda kuva nyaya zvakafanana OP kunze kuti ndakaenda kubva bhizimisi zvose ndaiva (sezvo mudzidzi wepakoreji) kutenga 60 BTC mu 2013 uye vakabata simba yakasimba 4 makore. Zvadaro vane dambudziko chepfungwa panguva 2016 uye kupa 20 BTC kure kune vavasingazivi paIndaneti yaingoda neni, usambofa kuonekwa zvakare. Zvadaro muna December, mazuva asati pamusoro, Ndakadzidza chii kumucheto wokutengesera chaizvoizvo akanga. Mad dukuduku ikakuruma. Akarasikirwa mari yakanaka apo akotsira panguva donhwe uye kudzingana rose chinhu (40 BTC) pasi 0.02 BTC.
Ndiri kudarika kunorira. Ndine chivimbo kuti ndiri kuenda kugumisa upenyu hwangu pamusoro ichi uye ndine vakatotanga raiparadzanisa pachangu kubva nyika uye kuwana mabasa angu kuitira. Ndinonzwa shamisa anoratidza uye kubvuma izvi Reddit, asi this post anorova musha, sezvinoita mumwe huru dzesub pamusoro munun'una mukomana uyo vakauraya pachake pamusoro chete mamiriro ezvinhu.
Ndinoyemura avo anogona kuakunda shure kwaizvozvi mhando asi handisi mumwe wavo. Ndaiziva kubva miniti ndaverenga chena bepa kuti Bitcoin aiva mutambo kuchinja pfungwa. Ini akadurura mari yangu mariri, chivimbo chokuti wemagazini yangu kwaikodzera miriyoni (20K) mukati 5 makore (Ndakadana ichi zvinenge zvakakwana). Zvakasiyana kunyange kufanana ndinoda kurarama imwe zvokushamisira mararamiro, Ini chete ndaida kunzwa mari wakachengeteka nokuda kamwe muupenyu hwangu uye aidawo upfumi vaya pedyo neni uye kubatsira kuvaka mabhizimisi akanaka uye nyika iri nani. The pombi uye dumpers uye Lamborghini memes vari kudaro obnoxious, sokunge nyika inoda zvakare zvisingafungi hedonistic consumerism. Ndakakura runako murombo uye bounced kubva zvinosimudzira kumba kusimudzira kumba uye kubva kuchikoro kuchikoro. Ndaisawanzobuda akariita kuburikidza kukoreji uye havana unyanzvi marketable. Ndakarasikirwa wangu akafa magumo okutengesa basa mwedzi mishoma shure uye handigoni kuuya pachangu kudzokera padikidiki kuwana Utenge. I akabata simba panyika makore, kunyange ndaigona ndakakunda zvirokwazvo akashandisa mari nguva. Ndaigara akauya kwangu kwemasikati kushanda uye nguva dzose akatora pevhu kana zvandaigona pane kubhadharira Über. Ini paakapiwa zviuru zvishoma madhora shure 2013 uye kumboona sendi nayo. OP kwazvo unokudzwa kupfuura ini nokuti ini Havamboendi vane kuzviremekedza kuremekedza kutsausa pasi mipiro asi ndiri uyewo runako vamwe kuti vanhu havasi kupa kuhondo duku vanhu vari mumamiriro ezvinhu akafanana uye ini pachena Don 't vakakodzerwa kuitevedzera. Pandinenge kumhanya neshamwari, ivo tichikumbira sei zvakanaka ndinofanira kuita nokuti vanoziva Ndagara Bitcoin mutsigiri kwenguva yakareba. Vachinyemwerera uye kutarisa pavo ziso apo kutaura chokwadi pamusoro Bitcoin ari kusimba Kunyorwa uye ini pakarepo kuda kukanda mapfumo ari pedyo mubhini mushure.
Ndinoziva imwewo nzvimbo muchadenga, pane 'ini’ uyo vakasatsigira kumucheto kutengesa kana akamira mushure Nokurasikirwa shoma kana haana kutanga kutamba nzombe pakutanga sebere musika. Not ini kunyange, Ndiri benzi uye ini akapambadza chete kuenda kwandiri muupenyu. Ndinovimba vamwe nyevero, asi ndinoziva kwazvo haazorambi. Chero nzira, Handina mhando pfungwa kuti chinhu seizvi enda uye handigoni kumira kurinda Bitcoin mwedzi zvakare uye uchasiiwa. Zviri Zvinosuruvarisa kuti mari anogona kuva simba zvakadaro pamusoro vanhu. Ndinoziva vazhinji vaiva hwavo zvinoshamisa achinja nani asi ndinofunga pane mativi maviri mari.
Handitombozivi kuti sei ndichiri obsess pamusoro Bitcoin uye ichi dzesub. Ini chaizvoizvo haagoni kufunga zvimwe nguva. Ndinofunga kuramba tichitarisira kuti achadonha vamwe shoma chaizvo chitsama uye kuti ini Podràs kutenga shure asi kuti hazvina musoro nekuti handina $10 wangu zita kuisa shure. Ndava kurasikirwa urovha yangu kubatsira uye pokugara pane mwedzi mishomanana uye muine po- kutendeukira kamwe zvinoitika.
Ndinoziva vanhu vakawanda ringakweva pachavo vachitidzidzisa bootstraps dzavo uye mberi asi ndinoziva kuti ndaisazombofa kutiza pfungwa dzangu. Sorry kuti rant zvakaipa pamusoro wako mutsa akakurukurirana Comment. Ndinoda OP chakanakisisa uye sokuti kuva nemafungiro nani zvikuru akananga nhamo kupfuura zvandinoita, kunyange aine mbambo ari kuti yepamusoro zvikuru.
pepeta: I kunyanya akazvidemba nokuisa ichi. I worudzii mawana zvaizoratidza kuti akavigwa, havana kuziva kuti shinda iyi achiri tsvarakadenga basa uye kuti ini anamira pamusoro mashoko. Tinotenda kuti mhinduro, PMs uye mashoko omutsa. Handisi mu ngozi chinhu uye akanga asiri kuedza kutanga tsitsi bato ini. Kunyange zvakadaro, Ndinokutendai mose nokuda kwenyu hanya.
JungleSumTimes Ndagara ikoko. Kurasika umambo hwangu yose 10 makore apfuura. Back padare mumwe. Jy rinovava uye vakatsamwa nokuda pechinguvana. Edza kuchinja girl. Kuchinja Latitude.
Just dzidza kuti tionge chii iwe une. Vachiri wako maziso? Maoko enyu achiri kushanda? Uri zvakanaka kutaurira majee? The zvinokosha. Ndinokutendai nyeredzi yako nokusingaperi-rudo pamusoro izvi.
Nokuti ndine mari kana kuva chero mari risingapi zvisingakwanisi kuchinja WHO muri. Rokushanda kuti mukomana. Mupei vamwe usimbe. Uchava shure. Just anotora nguva uye zvakawanda Kukanganwira pachako.
Rabbit0123 It zvichava OK.
Pane nyaya imwe Chinese mukomana aiva bhiza akanaka uye munhu wose aiva negodo pamusoro paro, achiti se "dude uri mupfumi saka". Akanga kunyemwerera uye pakupindura "haha tichazoona". Pane imwe nguva akamhanya kusango, saka vanhu vakanga vachiti: "o wanga zvakanaka, ari aenda uye iwe anoitwa murume !". Akapindura "Tichaona". In mwedzi shoma bhiza akadzokera vamwe namabhiza – vakomana iye anowanikwa dzesango. Vanhu vakanga romuromo "Iii ikozvino muri vakapfuma munhu mumusha, vanofanira kufara zvakadaro!". Akanga pakupindura "tichazoona" zvakare. Zvadaro mwanakomana wake apo uchiedza kuchovha mhuka mabhiza vakawira uye akaputsa gumbo rake… yaiva zvinhu zvakaipa zvikuru Ages China . "Oh ichi upfumi zvose zvashanduka kuva chituko". "Tichaona!". In vaviri moths vokuChina mambo akatanga kurwa uye akatora vakomana vose utano kubva mumusha, kunze kwaiye aiva akatyoka gumbo Ichokwadi. Vanhu vakanga kunorira. "Oh sei zvakanaka maiva harahwa , zvino tine hapana, Vanakomana vedu mudiwa aenda Muhondo benzi, uye makaramba namabhiza enyu uye mwana wako !". Fembera chii akapindura!
Chinhu chaizvo zvikuru mamiriro ezvinhu uye isu tiri pano zvose kugoverana marwadzo enyu uye kutambura. Chinhu chakakosha kurangarira Zvisinei ndechokuti WAKAFIRWA chete BTC shoma, uye upenyu haisi chete nemateru kwete chete makata, ndiwo kongiri zvose. Zviri simba renyu kwete kuti zvechokwadi zvakare kufara pamusoro nemateru zvakare yakaparadzwa pamusoro nezvisingafadzi, pashure rimwe pane rimwe zvinotevera , gara yakazaruka.
It zvichava zvakanaka dude, zviri zvakanaka kunyange ikozvino. Uchaona.
gypsytoy Ndatenda, murume. Ndizvo chaizvo rakanaka chinogombedzera zvinofananidzira uye handina kumbonzwa pamberi. Ichokwadi kuti zvinhu nguva dzose kuchinja nokuda nani kana kuipa uye pane zvinhu zvechokwadi zvakawanda kuraramira, Ndinonyatsoziva zvichava yakaoma kana zvisingabviri kuti ini kuti kurega ichi yose mutsekwende. pfungwa dzangu kare ini anotambudza uye zvino ane boka zvimwe huni kuita kudaro.
Thanks zvakare, Ndiri kutora mashoko aya mumwoyo.
doc_samson Kana uchida kuti nyaya unogona nokuverenga mamwe mabhuku Zen. Pakanga pane imwe, usingagoni kuyeuka zita, asi zvakanga diki kwazvo uye chaizvo gobvu uye chete aiva mufananidzo mumwe papeji neimwe kana maviri. Kunyanya mamwe mabhuku Zen pamusoro murwi mweya. Lots zvinhu vanoda kugamuchira rufu saka unogona zvechokwadi kurarama zuva nezuva wayo wakazara, nezvimwewo.
Uyewo Tao Te Ching vokuChina bhuku uzivi. Uye pamwe vamwe chiBhudha.
And Marcus Arelius’ Meditations, mijenya pamusoro Stoicism riri chaizvo zvakafanana Zen.
Rufu Anonyemwerera pa tose, asi zvose munhu anogona kuita kunyemwerera shure.
Une simba pamusoro pfungwa dzako – kwete kunze zviitiko. Ziva izvi, uye muchawana simba.
Mufaro hwako kunotsamira runako ndangariro dzenyu.
Kana uri akatambudzika nokuda chinhu zvokunze, kurwadziwa kushaya chinhu pachayo, asi kune yako yera payo; uye imi ichi vane simba titorerwe chero nguva.
Fontas upfumi Your rokutanga, akaita uye yakarasika. Ndagara ikoko.
Pane chete kuita mbiri. Yakanga iri rombo zvose, kana akanga unyanzvi?
Kana akanga mhanza, ipapo iwe aiva risingadaviriki usiku panguva kasino, asi haana cashed kunze. Pakupedzisira imba akunda, sezvo ivo ndichiita. Zviise shure iwe, kuita Meme nezvazvo, uye nyaya yekutaura mumubhawa. The yebhuruu piritsi.
Kana akanga unyanzvi, uri kutora dzvuku piritsi. Unganidzai mumwe 3k, uye itai zvose pamusoro zvakare. Just kudzokorora chii iwe wakaita rapfuura gore – saizvozvo, zvichava nyore uye nokukurumidza kechipiri kumativi. Uri gore shure, kuti sucks, asi iwe unenge vava kuita nayo shure zvose uye zvimwe. ndiko, kana wako zano zvechokwadi kurira.
Vanhu vakawanda vanoita uye kurasikirwa mhanza wavo wokutanga haana kuedza zvakare, uye kumboziva kana zvakanga mhanza kana unyanzvi.
I yakaguma vachisvetuka tsuro rejeri pashure pokurasikirwa yangu yokutanga zvokutengeserana upfumi. Best Mutongo hwangu. My Wechipiri akasvika kunyange kupfuura kutanga, uye akanga yakakura – chepakutanga inopfupikisa sokuti miniscule ikozvino.
Zviri kwauri, kana uchida kuziva kuti yakadzika wako netsuro mugomba anoenda.
zksnugsNdinonzwisisa marwadzo enyu. I zvechokwadi.
Dzimwe nguva ndinoda handina akasvika pakuziva crypto. Ndicho zvose kuropafadzwa nokutukwa. A chikomborero nekuti unogona kuwana 'kupenga gainzz', asi panguva imwe chete, iwe kuti inobatwa eerie nyika ino, apo pfungwa dzako achitsauka nepfungwa yakaita sei unogona regera munhu shoroma kana iwe usina kutengeswa mangwanani / akaita kuti zvakaipa tengeserana / Akatenga ainge nezvimwewo. Handifungi tinogona kumbobvira kutiza ichi. Chero bedzi tikaramba kurarama tichaita nokusingaperi kuva muranda nepfungwa idzi, izvo zvichaita nguva kudzokera kwatiri dambiro chii zvataigona 'Waita zvakasiyana'. Tinogona kumbobvira kufamba kure uye kukanganwa nezvazvo, kufanana chii chatingaita kubva noutera mamiriro ezvinhu. Nekuti kunyange vamwe vanhu vanogona kukanganwa, hatizombofi takakanganwa zviito zvedu.
FontasNzira asia yokubata rokuita uye kurasikirwa mhanza – pane chete 2 mikana. Yakanga rombo kana raiva unyanzvi.
Kana akanga mhanza, ipapo ini aiva risingadaviriki usiku panguva kasino, asi haana cashed kunze. Pakupedzisira imba akunda, sezvo ivo ndichiita. Akaisa zvose shure kwangu, kuita Meme nezvazvo, uye ichange chete kuva kusetsa nyaya kutaurira mumubhawa. The yebhuruu piritsi.
Kana akanga unyanzvi, Ndiri kutora dzvuku piritsi. Unganidzai duku garo, uye itai zvose pamusoro zvakare. Dzokorora zvandaita nguva yokutanga kumativi – saizvozvo, zvichava nyore uye nokukurumidza kechipiri kumativi. ndiko, kana nzira zvechokwadi kurira.
Vanhu vakawanda vanoita uye kurasikirwa mhanza wavo wokutanga kumboziva kana zvakanga mhanza kana unyanzvi.
I yakaguma vachisvetuka tsuro rejeri pashure pokurasikirwa yangu yokutanga dotcom kutengesa pfuma. Best Mutongo hwangu. My Wechipiri akasvika kunyange kupfuura kutanga, uye akanga yakakura – chepakutanga inopfupikisa sokuti miniscule ikozvino.
Chandinongodemba chete ari kupera 2 refu murombo makore mumba amai pamberi payo zvose rarira mumusoro mangu – rombo kana unyanzvi, Ndingadai kumbobvira kuziva – kana Ndinoedza zvakare uye ona. Ndezviya zvakanga unyanzvi.
gypsytoy Hongu zviri oma zvachose. Ndinofungidzira kuti mhinduro chete ndiko kuwana kukosha kupfuura zvimwe zvinhu zvoupenyu. Relationships, zvinhu, Musatsiva. Pane zvakawanda nzira kuedza kugadziridza pfungwa dzako pashure chinhu chakadai, Ndinongotyira handina zvokushandisa kana kuda kuita kudaro. Tinotenda kuti tinzwe.
AjaxFC1900 Ndakafunga yaiva wokutengesera shasha, mwari, chero
Kanganwa pamusoro fuma, zvikepe, hôtels nezvimwewo…pakupera kwezuva zvose pamusoro kunzwa, munhu wose akafanirwa kunzwa saizvozvo kanenge kamwe muupenyu…iwe wakaona kuti kunzwa chaizvo muduku…Usarwa zvakawanda, pakupera zuva tose kumboda watofa, ari Zano zvikuru zvinhu hazvina basa kuti zvikuru kana iwe wakaita kana varasikirwa 5 mamiriyoni , ndinokuudzai zvakawanda zano guru zvinhu kuvapo kwedu hazvina basa kuti zvikuru uye, kufanana Ndakati tiri atofa zvose zvakadaro.
It rakaoma, dzimwe nguva, kare kare nyore… zvakafanana kuenda kuhondo uye kana kuhwina nyika kana kuwana bara mumusoro kana kufira muhondo…zvino hatidi kuita zvinhu zvakare uye isu chaizvoizvo kugadzirisa kutadza kuri nzira kupfuura rufu pfungwa dzedu / pfungwa. Yakanga nzira nyore ikako, patakanga zvishoma akangwara uye zvoutsinye
Cinnamon_Twist I here kusada pfungwa iyi. Vanhu vekare vakanga kusimba vakangwara nokuti havana pachigaro accumlated ruzivo tine nhasi hazvirevi kuti vave savages. Unogona vachiri kuenda kuhondo kana aida hapana yauri iwe.
Kuti upenyu uzivi zvakare chaizvoizvo akasuruvara. Zviri asingaiti pachena kuti nokuti upenyu zvichaita pedzisire kwamuri kuti iwe hunofanira saka maturo uye dzenhando.
JungleSumTimes Ndinofunga pane rusununguko yakati kubudirira kubva pakuziva kuti tiri tose chete vaduku blips pamusoro guru chidzitiro. Kana muchigamuchira chisingakoshi chokuvapo kwenyu izvozvo inosunungura imi chaizvo kungova pachako uye saizvozvo munhu uye utevere zvinhu iwe rudo pane kunetseka dzose nguva sei vanhu unotonga iwe.
Guys kundoitora zvakaipa nenzira iyi nokuti bankroll yako huru chikamu sei iwe vanoonekwa uye akatsunga kuva kubudirira muupenyu. Pane matanho akawanda nani.
pepe_le_shoe Poker ane chinhu unyanzvi, asi kana munhu kubheja muropa antes kukwira, achaita wokubheja. Anogona kutamba zvakasimba kuti 2, 4, pamwe 6+ maawa, mazuva kunyange, asi pane imwe nguva, asati anoenda kumusha, achaita wokubheja. Iye achava kuti pfupi kwemakore mukuranga, achaita, kamwe chete, enda kuzorwa kusakundika uye bheji zvose pane imwe mukati yakarurama SWEDERA, kana kusundira zvakare nesimba pasi yakatarwa apo anoziva zvakadzama pasi kuti atanga kubuda wakavhomorwa.
Kune pokeria vatambi vari kukunda dzose nguva, zvimwe uine unyanzvi, ari Maths, kana kuverenga vanhu. Asi hapana vanhu ava vanobhejera vechokwadi. Vanobhejera nguva dzose kuenda kumba hapana.
Izvozvo ini kwekanguva. Handisi kutamba mari zvakare.
SamAiken Ndakanga ndisina 200 BTC, asi ini kunge mune kurereka ezvinhu akafanana kanenge kaviri. Hausiwe wokutanga kupfuma kutsanya uye tarasikirwa mari yako zvose. Luckily, hamuna vanoguma mujeri sezvo zhinji “kupfuma kutsanya” vanhu vanoita.
Maererano zvamakataura, une makuru ruzivo Makwanza pamusoro pekukosha diversification uye ngozi-utariri, saka ndapota kupedza imwe nguva kutsvakurudzwa nayo. Zvino imi muri yowakaipa BTC uye ndinoziva kunzwa izvi zvakanyatsonaka, asi achapfuura.
Pane mukana kuti tichava pamusika bearish kwemavhiki mashoma kana kunyange mwedzi, saka une nguva kudzikama, dzidzisa pachako pamusoro bhizimisi uye kubatana nesu gare gare inotevera chinozunguzirwa. Une zvakawanda uye ruzivo, pane avhareji crypto investor.
Zvino kukosha – Uchiri unogona kuvakazve Portfolio yako kubva muvare! Zvichatora yakareba, pane mishomanana, asi iwe unogona kuita. Ndakazviita. Vanhu vazhinji vakaita. Unogona kuzviita, wo.
Uye zvokutengeserana anogara nengozi, pfungwa uye asingauyi kuwedzera chero ukoshi kuti vanhu kana munharaunda, saka bhizimisi uye hodling ari nani zvikuru nzira kupfuma, pane kutengesa. Mukuru wawana, kunetseka ngozi zvikuru chichava iwe, unogona kukuurayai (e.g. kumira kurova kwemoyo). Saka tora nguva yako, kudzidza pamusoro ngozi-utariri, haana kutamba wako wose Portfolio, uye kana uchimuka cryptos zhinji zvakare, musakanganwa rebalance Portfolio yako nokuita mamwe mari kupinda Fiat mari, Real Estate kana mumatanda.
Kunze bhizimisi, ndapota musakanganwa kuisa pfungwa zvaunoda kuita muupenyu kunze ari mupfumi mukomana ichibhururuka jets. How uchida kubatsira vanhu uye pave nenzanga? Uye kushandisa nguva yako nokutungamirira ichi. Your ruzivo, ruzivo uye mukurumbira haazorambi chete kunyangarika kufanana BTC akaita.
Iva akachenjera uye tidzikame!
Fundstrat co-muvambi: bitcoin achaita mari $ 25,000, Amazon uye Facebook vachabatana blockchain Indus ...
Mune February 28 REP ...
Kukwikwidzana Nyika ...
New York nyaya cryp ...
Previous Post:Blockchain News 27 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 28 Ndira 2018